3 Casharrada Suuqgeeyayaasha Mawduucyadu waa inay ka bartaan tafaariiqda | Martech Zone
Sabti, Sebtember 19, 2015 Axad, Sebtembar 20, 2015 Douglas Karr
Erin Sparks waxay maamushaa Edge raadiyaha Webka, the Podcast waxaan kafaala qaadaynaa oo kaqeyb qaadanaa toddobaad kasta. Erin iyo anigu waxaan noqonay saaxiibo wanaagsan sanadihii la soo dhaafay waxaanan yeelanay dood yaab leh toddobaadkan. Waxaan ka hadlayey ebook soo socda oo aan u qoray Biyaha dhalaalay taasi waa la daabici doonaa dhawaan. Buug-gacmeedka, waxaan si faahfaahsan ugu faahfaahinayaa caqabadda ka jirta horumarinta istiraatiijiyad suuq-geyn iyo cabiridda natiijooyinkeeda
Hal fikrad oo dhex wareegaya madaxayga ayaa ah macno ahaan horumarinaya nooc dhimasha ah, oo mid kasta oo laadhuhu ah a walxo kala duwan oo lagu dabaqay mowduuc gaar ah. Luujiska u rogo oo go'aan ka gaadh xagasha aad ku qoreyso dulucda… laga yaabee inay tahay sawir-gacmeed wata xaqiiqooyin, sheeko sheeko, iyo wicitaan ficil ah. Ama Podcast leh saameyn wax ku ool ah oo la wadaagaya qaar ka mid ah daraasadaha jilitaanka gaarka ah. Ama waxaa laga yaabaa inay tahay xisaabiyaha isdhexgalka ah ee goobta ka caawiya go'aaminta soo noqoshada maalgashiga.
Qayb kasta oo ka mid ah waxay ka koobnaan kartaa isla mowduuca, laakiin waad qiyaasi kartaa sida - hal abuur leh - qayb kastaa sidoo kale way kala duwan tahay waxayna qabataa ujeeddada dhagaystayaal gaar ah. Laadhig duudduuban, dabcan, dhab ahaan maahan habka caqliga leh ee loo saadaaliyo loona soo saaro nuxur macno leh oo soo saara natiijooyinka ganacsiga ee loo baahan yahay. Kaas oo ii keenaya tafaariiq.
Gabadhayda, Kaar Karr, wuxuu ka shaqeeyey dukaan alaabada lagu qurxiyo oo qurux badan dhowr sano. Way ku raaxeysatay shaqada, waxayna ku baratay tan tan tafaariiqda iyo sida aan dib uga fekerayay xeeladaha nuxurka sanadihii la soo dhaafay. Maadaama ay tahay maamule qaabilaad, gabadhaydu waxay mas'uul ka ahayd dhammaan badeecadaha soo galaya dukaanka, waxay mas'uul ka ahayd alaabada, waxayna mas'uul ka ahayd bandhigyada suuqgeynta dukaanka oo dhan.
Casharrada Tafaariiqda ee Suuqgeeyayaasha Mawduucyada
Inventory - Sida soo booqdayaasha dukaanka ay u jahwareeraan markay dukaanku lahayn wax soo saar ay raadinayaan, ayaad lumineysaa macaamiisha maxaa yeelay ma lihid waxyaabaha ku jira bartaada rajadu raadineyso. Uma jeedno inaan eegno istiraatiijiyad suuq-geynta suuq-geynta sida qaadashada alaabtoo ah maxaa yeelay suuqleydu waxay u muuqdaan, halkii, inay u xisaabiyaan sida ay u socdaan. Waa maxay sababtu? Maxay ganacsatadu u abuurayaan liis kooban oo wax ku ool ah? Halkii aad weydiin laheyd inta boggag blog ah usbuucii shirkaduhu waa inay daabacaan, maxaa diidaya in suuqleyda waxyaabaha abuuraya ay filayaan guud ahaan kala sarraynta waxyaabaha loo baahan yahay?
Hantidhawrka - Halkii laga soo saari lahaa jadwalka taariikhda ee soo jeedinaya mowduucyo caan ah oo la qoro bisha soo socota, maxaan u ahayn, halkii, aan u sameyn lahayn falanqeyn farqiga u dhexeeya alaabada loo baahan yahay iyo waxyaabaha horay loo daabacay? Tani waxay hubin doontaa iskucelcelinta ugu yar waxayna gacan ka geysan doontaa sidii loo soo saari lahaa waxyaabaha ku jira. Sida badan sida guri loo dhiso, qaab dhismeedka ayaa marka hore la dhisi karaa, ka dib nidaamyada hoose, iyo ugu dambeyntiina qurxinta!
dallacaadaha - In kasta oo bakhaarku haysto tanno alaab ah, dukaanku wuxuu doortaa inuu xoogga saaro dhiirrigelintooda wax soo saarka aadka u faa'iidada badan ama cusub bil kasta. Shaqaalaha ayaa waxbartay, ololeyaal ayaa la sameeyay, soosaarista alaabada ayaa la qorsheeyay, iyo istiraatiijiyad omni-channel ah oo lagu hormarinayo waxyaabaha la soo saaray si loo kordhiyo faa'iidada iyo natiijooyinka. Waqti ka dib, maaddaama badeecadaha iyo dalabyada la beddelayo, dukaanka fariimaha ganaaxa iyo dallacaadaha si loo sii wado kordhinta natiijooyinka ganacsiga.
Sababtaas awgeed, waxaan u baahanahay inaan kala saarno qorista iyo suuqgeynta waxyaabaha ku jira. Qof leh nuqul daabacaad leh iyo karti tifaftiran macnaheedu maahan inay leeyihiin aragti lagama maarmaan u ah kaydinta, xisaabinta, iyo horumarinta dallacsiinta meheraddaada. Faahfaahintan ka socota Uberflip waxay ku dhex socotaa dhammaan sifooyinka suuqleyda waxyaabaha ku guuleysta.
Xasuusta dhinaca: Waxaan kugula socodsiin doonaa dhimashada iyo ebook-ga!
Tags: hanti dhowrkaTirinta waxyaabaha ku jiraSuuqgeyaha maaddadasuuq-galka macluumaadkatayada suuqyadadhiirrigelinta waxyaabahakireystaan ​​suuqgeynta waxyaabaha ku jiratafaariiqdauberflip